“Yaa yidhi waxa ay laba xisbi isku raacdo ayaa sharci ah? Goorma ayay xisbiyadu noqdeen Sharci dejin? Mujaahid Cali Guray | Somaliland One
“Yaa yidhi waxa ay laba xisbi isku raacdo ayaa sharci ah? Goorma ayay xisbiyadu noqdeen Sharci dejin? Mujaahid Cali Guray
“Si Kastaba Ha Ahaato Ee Waxa Kuligeedba Been Ah In Haddii Ay Laba Xisbi Diidaan Sharci Jira Uu Waxba Kama Jiraan Noqonayo” – Muj. Cali Maxamed Yuusuf (Gurey) “Anigu Waan Ixtiraamayaa Xisbiyahanka WADDANI Ra’yigooda, Marka Laga Reebo Kuwa Qaba Xannuunkii Aan Ka Bogsaday Ee Ahaa…”
Siyaasi Cali Guray ayaa ka hadlay xaalada cakiran ee la xidhiidha qabashada doorashada madaxtooyada oo ay ku gadaaman yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay abaarta ba,an ee dalka saamaysay waxaana uu sidaasi ku sheegay mar uu bartiisa xidhiidhka bulshada ee facebook soo dhigay qoraal kooban oo u dhignaa Sidan:
“Yaa yidhi waxa ay laba xisbi isku raacdo ayaa sharci ah? Goorma ayay xisbiyadu noqdeen Sharci dejin? Dastuurka ayaan eegay dhamaan xeerarka Baarlamanka waan eegay anigu kuma hayo xeer odhanaya xeer laba xisbi hadii ay isku raacaan yaan doorasho la qaban sharci bay noqonaysaa Caqli xumada Somaliland waa ta odhanaysa Ina Cali Waraabe ayaa keligii xisbi ah.
Xisbi yahanka WADDANI anigu waan ixtiraamayaa ra’yigooda marka laga reebo kuwa qaba xanuunkii aan ka bogsaday ee MUUSE-DIIDKA. Lakiin Ina Cali Waraabe maaha qof jira oo caqligiisu dhan yahay oo u qalma in wax laga waydiiyo dan ummadeed. Inta aanu dan qaran ka talin wuxu ka talin lahaa danta xisbigiisa oo la ogyahay inu isagu iska hortaagay inu tartami karo oo uu beegsan karo inu noqdo xisbi qaran.
Maanta nacnacdiisa cidii dhegaysanaysaa ha iska dhegaysayo. Waa iib u joog ee maantana tollow waa ayo cidda uu is leeyahay aad caamaysid. Waa qof aan shakhsiyad iyo karaamo midna lahayn oo hadaad aaminto ku khiyaamaynaya hadii aad wacad la gashana aan oofinayn ee ka baxaya oo bilaa wacad ah. Marka qofka sidaas ah la karaameeyo ee masiirka ummadda waxa laga waydiiyo ayaaba qalad ah. Lakiin waa qof maalinta aad u baahan tahay in lacag ahi kuu goyn karto. Si kastaba ha ahaato ee waxa kuligeedba been ah in sharci jira ay laba xisbi haddii ay diidaan uu waxba kama jiraan noqonayo”